Imfihlo Yokuphumelela Uhlu Lwama-imeyili Ukukhangisa kanye ne-imeyili Yezindaba
Imfihlo Yokuphumelela Kuluhlu Lwama-imeyili Ukukhangisa Nama-imeyili
Lwesine, Disemba 3, 2009 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 UScott Hardigree
Qaphela: Lokhu okuthunyelwe akubhalwa kubanikazi bohlu. Kubhalelwe abakhangisi abaqasha uhlu lwama-imeyili noma abakhangise ezincwadini zezindaba ze-imeyili. Uma ungumkhangisi ono, noma ohlela ukufaka i-imeyili yenkampani yangaphandle kumxube wakho wokumaketha kuzosiza ukusebenzisa isiteshi ngempumelelo enkulu futhi uthole i-ROI engcono, enezabelomali ezincane. Ekugcineni, kuzosiza uhlu lwabanikazi, futhi. Phela umkhangisi ojabulayo ungumkhangisi ophindayo.
Kuyo yonke iminyaka yami ekumakethweni kwe-imeyili zombili ku- i-imeyili ejensi yezentengiso nohlu lokuqashwa kohlu lwama-imeyili, ngibe nezingxoxo ezimbalwa ezinjengalezi, futhi ngichaza ngamafuphi, “Ngikhansela imikhankaso yami ngoba angitholi ngokwanele [ukuchofoza, ukuhola, ukuthengisa, noma eminye imiphumela ebonakalayo]. ”Umkhangisi ube esedonsa umkhankaso bese eshiya edumele ngokusebenza kohlu lwama-imeyili.
Kepha kube nezimo lapho, ngaphambi kokuba umkhangisi (noma i-ejensi yakhe noma uhlu lwabathengisi) bathathe umkhankaso, babezimisele ukwenza ushintsho oluncane futhi baphinde bahlole. Futhi kulabo abake bazizwa bedumele babona ukuthuthuka ngokushesha ekusebenzeni komkhankaso. Ngabelane nabo ngemfihlo eyodwa yokuzama nokuyiqiniso yokukhangisa kwe-imeyili okuphumelelayo, okuyi:
Qondanisa inqubo yakho yokudala neyokuphumelela kunhloso yakho yomkhankaso.
Yebo. Lokhu ukumaketha 101, kepha angikwazi ukukutshela ukuthi kukangaki ngibona ukuthi izinhloso, ubuciko, nezinyathelo zempumelelo zenziwe kabi. Futhi uma sebekhona, umkhankaso awusondeli ndawo ngempumelelo njengoba kungenzeka. (QAPHELA: Ngezizathu ezingaziwa ukuthi lokhu kungalungi kwenzeka kaningi nge-imeyili.)
Izindaba ezinhle ukuthi ukulungiswa okulula okungaguqula ngokushesha i-ROI yokuthengisa nge-imeyili. Lapho ubheka umkhankaso we-imeyili-centric, qala ngokuzibuza le mibuzo emine:
Yini inhloso yami ngalo mkhankaso?
Ingabe ikhasi lami lokudala nelokufika lihambisana naleyo nhloso?
Ingabe ukunikela kwami, ikhasi lokudala nelokufika kunengqondo kubalaleli bami hhayi kimi kuphela?
Ngingayilinganisela kanjani impumelelo yomkhankaso, futhi ingabe ihambisana nenhloso?
Yini ozama ukuyizuza? Ukubeka uphawu? Ukubhaliswa? Umbuzo wokuthengisa? Ukuthengwa okusheshayo? Noma ngabe iyini inhloso yakho, qiniseka ukuthi ikhasi lakho lokudala, lokufika, nezilinganiso konke kuhambisana nenhloso futhi kunengqondo ngokubuka kwezethameli zakho (okuvame ukwehluka kunokwakho).
Ingabe ukufaka uphawu lomgomo wakho? I-imeyili ifinyelela ngempumelelo imigomo esemqoka yokubeka uphawu: ukuqwashisa, ukuhlangana kwemilayezo, ukuthandwa, inhloso yokuthenga, njll. Ngithole ukuthi iningi labakhangisi, ikakhulukazi uma lisebenzisa izikhangiso ze-e-newsletter, liphumelela kakhulu ngokufaka uphawu lwezikhangiso kusiteshi se-imeyili. Abadali babo bayabandakanyeka, umkhiqizo wabo ugqamile, futhi baqinisa imilayezo abafuna ukuthi umbukeli ayihlanganise nemikhiqizo yabo. Kepha ukunqamula, uma kukhona okukodwa, kuza lapho umkhangisi elinganisa umkhankaso ngokuchofoza noma enye imethrikhi lapho okwakwakhiwa kwakungakaze kuhloswe ukuthola leyo mpendulo. Umkhiqizo ulinganiswa nomthelela lapho ukubuka (okungukuthi, umbono) isikhangiso sinakho ekuboneni nasenhlosweni yombukeli, hhayi ngempendulo esheshayo. Esikhundleni sokusebenzisa amanani avulekile njenge-barometer yakho.
Ufuna ukuvakashelwa kuwebhusayithi yakho noma ukubhaliswa okusha? Kuhle! Qiniseka ukuthi udizayina ubuciko bakho ukuze uthole leyo mpendulo. Uma umlayezo wesikhangiso sakho uthi, “I-WidgetTown: Amawijethi amahle kakhulu aseduze. Chofoza lapha ukuthola okuningi. ” kungenzeka ukuthi ube nomthelela emibonweni yomkhiqizo wethemba, kepha mancane amathuba okuthi ubenze bachofoze. Kungani kufanele? Banalo lonke ulwazi abaludingayo, futhi phansi komgwaqo, uma bedinga iwijethi, maningi amathuba okuthi bakushayele. Kepha ngeke bachofoze njengamanje noma bona, ngokubona kwesikhathi esihle kakhulu, banesidingo ngokushesha. Uma umgomo wakho ukubhalisa, nika umbukeli isizathu sokuchofoza. Banikeze okuthile okubaluleke ngempela (kubo).
Ingabe umgomo wakho uhola isizukulwane? Ikhasi lokukhuthaza nelokufika manje selibaluleke kakhulu emkhankasweni wakho. Ingabe i-tie yokudala iya ekhasini lokufika? Ngabe isikhuthazo siyakhuthazwa kwezobuciko esiboniswe ngokusobala nangendlela evelele ekhasini lokufika? Ingabe kucacile ekhasini lokufika (ne-imeyili) ukuthi yini okufanele ikwenze ngokulandelayo, futhi isikhuthazo siqinisiwe? Ngabe kukhona okuphazamisayo (ukuzula, izixhumanisi zenethiwekhi yokuxhumana nabantu, njll.) Ezingaphazamisa ithemba ekuqedeni umsebenzi? Noma yikuphi kwalokhu kunganciphisa ukusebenza komkhankaso wesizukulwane sokuhola futhi kunciphise inani lemikhombandlela oyikhiqizayo.
Mhlawumbe inhloso yakho ukuthengisa online. Ingabe kungumkhiqizo othile umuntu angawuthenga ngesifiso noma imikhankaso yakho kufanele igxile emicimbini, njengamaholide? Ngabe usudlule kuyo yonke inqubo yokuphuma? Ingabe ihlanzekile futhi ilula, noma ihlanganisiwe futhi iyimfihlakalo? Ingabe ulandelela ukulahlwa kwenqola ukuze ubone ukuthi izindawo eziyinkinga zikuphi? Ingabe umhlinzeki wakho we-imeyili (i-ESP) noma isisombululo sangaphakathi sokuxhaswa kwesixazululo se-imeyili? Ngabe ufaka ikhukhi kwiziphequluli zezivakashi ngakho-ke uma zibuya ezinsukwini ezimbalwa bese zithenga lowo mkhiqizo, ungafaka isikweletu kumkhangiso owenze ukuhola?
Ngendlela, ungazami ukufeza izinhloso eziningi ngomkhankaso owodwa. Izofana ne-futon? Ayenzi usofa omuhle kakhulu noma umbhede omuhle kakhulu.
Lezi ngezinye nje zezinto eziyisisekelo kodwa ezihlala zikhona ezingathinta izenzo ezifunwayo futhi ngaleyo ndlela uvivinye i-ROI yemikhankaso yakho ye-imeyili yenkampani yangaphandle. Khumbula nje, umugqa phakathi kwempumelelo yezentengiso ye-imeyili nokwehluleka okuhlobene okuhle. Sebenzisa lezi zinyathelo ukuqinisekisa ukuthi imilayezo nezinhloso zakho zikulayini futhi ungahambisa ngokushesha imitha ye-ROI ukuze ikuthandele.
Tags: kelly kellyiposiukwakha iqembu